मेयर ज्यू ! पहीला पशुचौपाय व्यवस्थित गरौ | www.itaharifm.com.np
गृहपृष्ठ » इटहरी अपडेट » मेयर ज्यू ! पहीला पशुचौपाय व्यवस्थित गरौ
मेयर ज्यू ! पहीला पशुचौपाय व्यवस्थित गरौ
Posted by Itahari Fm | error | ६८९ पटक
स्मार्ट सिटि बनाउने लक्ष्य बोकेको इटहरी उपमहानगरपालिका लाइ पशुचौपाय ले पनि गिज्याइरहेका छन् । इटहरीको मुल बजार आसपास बिच सडकमा छाडा छाडीएका चौपायको कारण ट्राफिक व्यवस्थापन समस्या पदै आइरहेको छ । त्यती मात्र हैन बिच सडकमा छाडा गाइ र साढे लाइ गाडीले ठक्कर दिएर घाइते बानाउने घटना बढ्न थालेको छ ।
केही दिन अगाडी मात्र इलाका प्रहरी कार्यलय अगाडी एक बसको ठक्कर बाट एउटा साढे घाइते भयो । जसको कुनै उपचार हुन सकेन । केही दिन बाटोमै छाडीयो र अहिले खोला किनारमा लगेर राखीएको छ । समाजीक अभियन्ता हरुले त्यस बिषयमा चासो दिएको पाइयो तर खासै सुनुवाइ हुन सकेन ।
त्यसको लगतै बिराटनगर लाइनमा बिश्व आदर्श कलेजको गाडीको ठक्करले एउटा गाभिनो गाइ घाइते भएको छ । जसको पछाडीको खुट्टाको जोर्नी खुस्किएको छ । त्यसको उपचार कसले गर्ने र त्यसको संरक्षण र व्यवस्थापन कसरी गर्ने केही अत्तोपत्तो छैन । गाइको वरपर भुसीया कुकुर घुम्न थालीसकेका छन् । भने झिगाको कारण छेउछाउका पसलभरी भिगा भन्किन थालेको पसलेको गुनाुुसोछ ।
बारम्बार सवारी दुर्घटनामा परी घाइते हुने चौपायाको त बिजोग हुन्छनै जसले गर्दा सहरको व्यवस्थापनको खिल्लि उडाइरहेकोछ । ट्राफीक व्यवस्थापनमा खटिएका प्रहरीलाइ चौपाय खेदाउनमै सकस पर्ने गरेको छ । ठुलठुला साढेले हान्ने डरेले कसैलेपनि त्यसलाइ चलाउने कोसिस गदैनन् । तर त्यसैको कारण बारम्वार सडक जाम हुने गरेको छ । एउटा सहर व्यवस्थित हुन सडक बिजुली भएर मात्र हुदैन । त्यो सडक र बिकाशको पुर्वाधार कत्तिको सुरक्षित छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्ने गर्छ ।
इटहरीका जनप्रतिनिधिले यो समस्यालाइ चाडै समाधान गरीने भनेर धेरै पटक बाचा गरीसकेका छन् । मेयर द्धवारीकलाल चौधरीले हरेक वडामा कान्जि हाउस निर्माण गरीने बताए पनि अझै सम्म त्यसको व्यवस्थापन हुन सकेन । तर दिनानुदिन पशुचौपायको दुर्घटनाको कारण सहर अव्यवस्थित बन्दै गइरहेको छ । सडकको व्यवस्थापन र चौपायको व्यवस्थापन हुन नसक्दा यस्तो समस्या आएको सामाजिक अभियन्ता हिरा आचार्य बताउछन् ।
इटहरीमामात्र हैन यो समस्या आसपारका हरेक नगरमा पनि त्यतिकै छ । तर कही कतैपनि उचित व्यवस्थापनको पहल भएको पाइएको छैन । स्र्माट सिटि बनाउन चाहीने न्युनतम आधार पनि तयार नपारी जनतालाइ सपना मात्रै बाढ्ने प्रबृतिले निराशा बनाउने प्रस्टछ । त्यसैले जनप्रतिनिधि ज्यू हरुले बेलैमा यस बिषयमा चासो दिन जरुरीछ ।